Ogaden News Agency (ONA) – Amnesty International oo soo bandhigaty tacadiyada gumeysiga Ethiopia geystaan
Posted by ONA Admin	/ May 23, 2013
Haayada caalamiga ah ee Amnesty International oo ah haayad u dooda Xuquuqul insaanka ayaa soo saartay warbixin aad u dheer oo ay kaga waramayso sanadkii 2012 illaa sanadka 2013 waxyeelada ay gumeysiga ethiopia u geysato shucuubta ku hoos jirta gumeysiga Woyanaha.
Amnesty International ayaa Warbixintan ku sheegtay in dhulka Ethiopia ay ka socdaan daggaalo xoogan oo u dhexeeya ciidanka dowlada Ethiopia iyo mucaarad badan oo kasoo horjeeda taliskaas. goobaha daggaalku ka socdo ayay Amnesty International ku sheegtay Dhulka Somalida Ogadeniya, dhulka orormada iyo dhulka Canfarta.
Haayada Xuquuqul Insaanka Amnesty International warbixintan dheer waxaa kale oo ay kaga warantay in shacabka taliska Itoobiya ku hoos nool aysan heysan wax xoriyad ah dhinac kastaba. Warbixintan ayaa waxaa lagusoo bandhigay shacab aad u badan oo mudadaas sanadka ah la xidh xidhay, dad badan oo jidh dil loo geystay, gumaad iyo waxyeelo loo geystay siyaasiyiin iyo saxaafada.
Amnetsy International ayaa warbixintan kaga hadashay dhulka Somalida Ogadeniya. Ciidamada gumeysiga Ethiopia iyo kuwa hawaarinta ee Liyuu poliska ayaa kawada dhulka somalida Ogadeniya xasuuq iyo tacadiyo aad u xoogan. tacadiyada iyo xasuuqaas ay taliska Ethiopia kawado dhulkaas cid madax banaan oo baadhitaan ku sameysay ma jirto taliska Ethiopiana waxa uu saaray cunaqabatay dhulkaas iyada oo illaa eega cid madax banaan oo gali karta aysan jirin.
Amnetsy International ayaa ka howl gasha gabi ahaanba wadamada Adduunka marka laga reebo wadanka Ethiopia. Websiteka amnesty international ayaa marka aad doorato liistada wadamada ay ka howl gasho waxaa kuusoo baxaya wadankaas kama aan shaqeyno. Gumeysiga Ethiopia ayaa Haayada Xuquuql Insaanka Amnesty International kasoo ceydhiyay gabi ahaanba Ethiopia kadib markii ay soo bandhigtay xogta dhabta ah ee ka jirta halkaas.